Robert Lewandowski Oo Si Aad Ah U Doonaya In Uu Mustaqbalkiisa Ku Dhamaysto Real Madrid
HomeWararka CiyaarahaRobert Lewandowski oo si aad ah u doonaya in uu mustaqbalkiisa ku dhamaysto Real Madrid
February 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Robert Lewandowski ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inuu mustaqbalkiisa ku soo gabagabeeyo Real Madrid .
33-sano jirkaan ayaa ku sugnaa Bayern Munich tan iyo 2014-kii, isagoo matalay kooxda heysata horyaalka Bundesliga 358 jeer tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 329 gool, waxaana uu ka qeyb qaatay 68 caawin.
Lewandowski ayaa heshiiskiisa haatan ee Allianz Arena waxa uu dhacayaa June 2023, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray hadal hayn badan oo ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka bilihii la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay AS , xiddiga heerka caalami ee dalka Poland ayaa doonaya inuu xirfadiisa ciyaareed ku dhameysto Real Madrid, waxaana uu si aad ah u doonayaa inuu u dhaqaaqo kooxda Carlo Ancelotti inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Lewandowski uu u soo muuqday dooq dhab ah Los Blancos, iyadoo Borussia Dortmund Erling Braut Haaland aysan haatan u badneyn inuu ku biiro kooxda xagaagan.
Lewandowski ayaa markale qaab ciyaareed heer sare ah ku soo bandhigay kooxdiisa Jarmalka intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 35 gool, waxaana uu diiwaan geliyay seddex caawin 29 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.